IBrand Afrika iqhubela phambili njengoko iZambia ihlangana noMbutho woLawulo lwamaZibuko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » IBrand Afrika iqhubela phambili njengoko iZambia ihlangana noMbutho woLawulo lwamaZibuko
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
Septemba 26, 2017
UMphathiswa wezoKhenketho noBugcisa uMnu. UCharles Banda uthe iZambia kungekudala iza kubona indlela yokukhulisa ukhenketho lokuhamba ngenqanawa ngokusebenzisa imizimba yamanzi efumanekayo njengoko iNtloko yeMishini yaseSeychelles eZambia, uJamil (Jimmy) Butt, ithe ilizwe lakhe lifuna ukukhulisa ubuhlobo phakathi kwamazwe amabini. ngokuhambelana nesiVumelwano sokuBambisana ngokuBanzi esele sikhona phakathi kwala mazwe mabini.
Ethetha kule veki xa uMnu Butt ekhatshwa nguMbutho woLawulo lweZibuko eMpuma naseMazantsi e-Afrika (PMAESA) uNobhala weSigqeba uNozipho Mdawe ebize imbeko kuye, Mhlekazi. UBanda uthe ukulungele ukwabelana nabanye ngombono wokwahlula eli candelo ngokusebenzisa imizimba yamanzi.
Umphathiswa uthe ngokuhambelana nenkqubo yokwahluka kwezokhenketho, iZambia yenza konke okusemandleni ukwazisa abantu ukuba amandla okhenketho eZambia angaphaya kweVictoria Falls.
Uthe inyani yokuba uMphathiswa wezoKhenketho waseSeychelles uthumele isimemo sokuba atyelele yena kwelo lizwe, ibiyimpawu elungileyo yokuba lo mmandla wenza iinzame zokukhulisa amacandelo abo okhenketho.
Umnumzana Butt uthe iSeychelles sele inethuba ngoku ibambisene neZambia ngotshintshiselwano ngenkcubeko ngexesha leLivingstone International Cultural and Arts Festival (LICAF).
Abathunywa baseSeychelles bathi yayingumnqweno woMphathiswa wakhe ukubona uHon. UBanda uyinxalenye yemibhiyozo ye-FetAfrik elandelayo eSeychelles.
Ngeli xesha uNobhala weSigqeba se-PMAESA uNozipho Mdawe uthe ukhenketho lokuhamba ngenqanawa lusebenza kakuhle kakhulu apho luqale khona kwaye iZambia inokuxhamla ngendlela efanayo.
Abameli abaninzi belizwe lezoKhenketho baxoxe ngephulo "le-Cruise Africa" ​​yi-PMAESA, (Umbutho woLawulo lwamaZibuko eMpuma naseMazantsi e-Afrika).
Amazwe ase-Afrika abona ukuba banezixhobo kwaye banakho ukufumana i-Cruise Ships okanye ukuphuhlisa ukuhamba ngenqanawa emilanjeni, emanzini nasemachibini baya kumenywa yi-PMAESA kwindibano kungekudala ukuze babeke ukuHamba ngenqanawa e-Afrika kwi-ajenda ye-One Africa.